HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER EE MAANTA OO AH SABTI 6-DA LUULYO 2019-KA
Saturday July 06, 2019 - 09:10:10 in Wararka by Mogadishu Times
WASIIR FAROTOON"MAAMULKA XAMAR KA DHISANI ISAGA GINNI U BAAHAN EE GINI UMA BAAHNA" Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Prof. Yaasiin Maxamuud Xiin (Faratoon) ayaa ka hadlay cilaaqaadkii dawladda So omaaliya u jartay Gini Co
WASIIR FAROTOON"MAAMULKA XAMAR KA DHISANI ISAGA GINNI U BAAHAN EE GINI UMA BAAHNA" Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland Prof. Yaasiin Maxamuud Xiin (Faratoon) ayaa ka hadlay cilaaqaadkii dawladda So omaaliya u jartay Gini Conakry, waxaanu shegay inaanay Ginni u baahnayn Soom aaliya ee Soomaaliya u baahan tah ay Gi ini.Sidoo kale, wasiir ku waxa uu sheegay in 3dii sanno ee u dambeeyey da wladda Soomaaliya ku dhaqaaqaysay arr imo sii kala fogaynaya Somaliland iyo Soo maaliya, taas oo colaad iyo xummaan mo oyee wax kale u soo kordhinayn 2da shacab.
"Cilaaqad weyn baa inoo soo kordhay oo 2da madaxweyne way is arkeen, waxa aanu aaminsannahay in wax badan u soo ko rdhinayo dhinac walba oo aanu ahayn mid laga naxo ama la dhibsado, waxana soo gaadhaya in maamulka Xamar ka tal iya uu arintaasi ka xummaaday sidaas dar teed uu gooyey cilaaqaadkii uu la lahaa dalkaasi Ginni, maamulka Xamar ka dhisa ni isaga Ginni u baahan ee Gini uma baa hna, waxna kuma yeeli karo
xidhiidhka wa naagsan ee u bilowday Ginni iyo Somalila nd, Xamar iyada la ilaaliay isaga wax la ta ra isaga nabadgalyadiisa la ilaaliya isaga guryaha lagu ilaaliya, annaga wax uuna yeelayaa ma jiro ee isaga wax iska xuma ynaya, waxa kaliya ee ay na tusaysa cad aawada iyo ciilka iyo wax kala fogaan sho sii dhaliya mooyee inaanu maamulkaasi wax kale ku kicin.”ayuu yidhi wasiir Farot oon.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi "maamulkaasi dhawrkii sanno ee u dambeeyey wuxuu samaynayey wixii aanu ku sii kala fogeyn lahayn hadday tahay mucaawimooyinka oo la nagala dag aalamo, dadkeenu oo uu isku dayo inuu godoomiyo, nabadii lagu wada noolaan la haa oo uu ku bedeshay colaad wax wana ag ah oo la iskugu soo dhowaado maamul kaasi lagama arag.”
Wasiir Farotoon ayaa sheegay inuu sii xoogaysanayo xidhiidhka ay dalal badan oo caalamka ah la yeelanayaan, waxaanu xusay in dalal badan oo afrika, Aasiya iyo Yurub hore uga lahaayeen xidhiidh saaxii binimo.
JADWALKA GUUD EE DOORASHADA JUBBA LAND OO LA SOO SAARAY
Guddiga Madaxa Bannaan ee Door ashooyinka dowlad Goboleedka Jubbala nd ayaa soo saaray Jadwalka Guud ee Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaan ka iyo mida Madaxweynaha mamulka Jub baland. Guddiga ayaa shaaciyay in Diiw an galinta musharaxiinta Madaxweynaha ay bilaaban doonto 16ka Bishan July 201 9,iyadoona ku eg 22ka Bisha.
Sidoo kale Guddiga ayaa sheegay in Diiwan galinta musharaxiinta Guddoomiya ha Baarlamaanka ay bilaaban doonto 14ka Bisha soo socda ee Agoosto,kuna egtahay 15ka bishaas.
Guddiga Madaxa Bannaan ee Doo rashooyinka Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay in Doorashada Guddoonka Baarl amaanka Jubbaland ay dhici doonta 18ka Agoosto.
Ugu dambeyn Guddiga ayaa shaaciy ay in Doorashada Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland ay dhici doonto inta u dhexeysa 2430 bisha Agoosto.
Qareenka guud ee kenya ayaa doona ya in maxkamadda ay daaqaddaa ka tuur to kiis ay soo gudbiyeen dad reer kenya ah oo doonayo in dowladdooda ay ka bax do kiiska la xiriira muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaliya. Kiiska ayaa waxaa gudbiyay labaatan sharci yaqaan oo uu hor kacayo Weldon Korir, kuwaasi oo ku doodaya in ka qeyb galka kenya ee kiiskani uu ka hor imaadsanyhay sharciga dalka.
Qareenka guud ee Kenya, Kennedy Og eto, ayaa sheegaya kiiska ay geeyeen Kiri ro wa Ngugi iyo labaatanka kale uu yahay mid iska ciyaar ah. Dacwad oogeyaasha ayaa waxaa matalyay qareen Kibe Mu ngai. Kenya ayaa Maxkamadda Cadaalad da ee Aduunka waxaa ka dacweeyay Soo maaliya bishii August ee sannadkii 2014kii, kadib markii ay ku murmeen dhul bade ed gaaraya ilaa 100,000 oo kilometre oo isku wareeg ah. Markaa kadib Kenya ay aa iyadana soo oogtay dacwad ay Soom aaliya isaga difaaceyso, iyada oo ku dood eeyso in Maxkamadda ICJ aysan awood u lahayn in kiiskan ay dhageeysato.
Kenya ayaa ku doodeeysay in marka hore la raadiyo waddo kale oo lagu xalliyo khilaafka dhanka badda ah ee u dhaxeeya iyaga iyo Soomaaliya. Maxkamadda ICJ ayaa 2dii bsihii Febaraayo ee 2017kii ga ashaanka u daruurtay, taas oo ku doodee yso in heshiiska is afgarshada uunsan xal u noqon Karin kiiska badda ee Sooma aliya.
Wax ka ogoow dhagaysiga dacwadda ICJ ee Soomaaliya iyo Kenya
Monica Juma : Kiiska Soomaaliya aad buu u jilicsanyahay
Kiriro iyo 19ka kale ee sharci yaqaanada ah ayaa aaminsan ka qeyb qaadashada Kenya ee kiiska badda ee loo asteeyay in la dhageeysto inta u dhxeeyso 9ka Sept ember iyo 13ka, uu wax ka baddeli karo xadkeeda iyo khariiraddeedaba.
Waxa ay doonayaan in Maxkamadda Sare ay soo saarto qoraal ammar ah oo ay ku joojinayso in ICJ ay dhageeysato ki iska badda ee Soomaliya kala dhexeeyo maadaamaa aysan haynin caddeymo sha rci ah, sidoo kalana heshiiska is afgarsha da ee la gaarayna uu madmadaw ku jira.
Labaatanka qareen ayaa waxay aaminsan yihiin in dawladda Kenya aysan horay usii wadi karin kiiskan iyadoo la eegayo shar ciga kenya u yaalla.
Labaatankan ayaa sheegay in Kenya aysan sii wadi dooonin ka qeeyb qaadash ada dhageysiga Maxkamdda iyada oo aan ka baqayn in dhulkeeda lumo sidoo kala na ka cabsi qabin in dhulkeeda iyo mad axbanaadideedaba gorgortan u gelin .
Maxkamdda ayaa waxaa loo sheegay in inkastoo Kenya ay aqoonsan tahay xuk unka ICJ, haddana Kenya uu shaki uga jiro kiiskaasi.
Dadka dacwadda geeyay ayaa waxay aaminsayihiin sababta ay uga hor yimaa den inay tahay inay suutro gal ahayn in dhammaan khilaafyada lagu xalliyo max akamadaha.
Dhibaatooyinka ama khilaafyada qaar ayaa waxa ay u baahanyihiin in lagu xall iyo geedi socod dhanka siyaasadda ah amaba diblomaasiyadda ah taasi oo ay la gama maarmaan tahay in la' is hor keeno muwaadiniinta waddamada khilaafka uu ka dhaxeeyo oo ay iyaga go'aanka ugu dambeeya gaaran.
Khilaafka diblumaasiyadeed ee labada dal Arrintan la xiriirta xuduudda badda ay aa dhalisay khilaaaf diblomaasiyadeed oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay, ka dib markii dowladda Kenya ay Soomaaliya ku eedeesay in London ay ku "xaraa shtay" ceelal shidaal oo ku yaala xuduuda lagu mursan yahay.
Dacwaddan la xiriirta muranka dhanka xsuduudda badda ayaa soo jiitameysay in ka badan 10 sano, balse dowladdii madax weynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sh. Maxamuud ayaa maxkamadda ICJ geys ay kiis ka dhan ahaa Kenya oo dooneysa in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka.
Soomaaliya waxay dooneysaa in cabbirka xadka badda si toos ah loola simo xadka dhulka, halka enya ay dooneyso in la weeciyo. Baaxadda uu ku fadhiyo badda lagu muransan yahay waxa uu gaarayaa ilaa 100,000km oo isku wareeg ah.
GOLAHA WASIIRADA SOOMAALIYA OO ANSIXIYAY HESHIIS CUSUB
Shirka golaha wasiirrada oo shalay uu guddoomiyay R/Wasaare kuxigeenka dal ka, Md.Mahdi Maxamed Guuleed (Khad ar) ayaa lagu asixiyay heshiiska cusub ee dhex maray DFS iyo shirkadda Favori ee gacanta ku heysa garoonka Aadan Cab dulle. Heshiiska oo golaha ay u soo gud bisay wasaarada duu lista hawada ayaa cod aqlabiyad leh la gu meel mariyay.
Shirka shalay ay golahu yeesheen ay aa sidoo kale lagu ansixiyay hindise sharc iyeedka Nootaayada dadwaynaha iyo Hin dise Sharciyeedka qareennada Soomaal iya oo ay usoo gudbisay wasaaradda ca ddaaladda XFS.
Golaha wasiirrada ayaa hamblayo, bo gaadin, taagero iyo duco isugu daray R/W XFSMd. Xasan Cali Khayre iyo howl wa deennada la shaqeynaya ee deegaanna da dowlad gobaleedka Galmudug u jooga dibuheshiisiinta iyo dhismaha dowlad go baleed Galmudug loo dhanyahay.
CIIDAMMADA JANARAAL KHALIIFA HAFTAR OO SOO RIDAY DIYAARAD
In ka badan 3bilood ayay dagaallada sii socdaan Ciidammo daacad u ah Janaraal Khaliifa Haftar ayaa waxay sheegeen inay soo rideen diyaarad ay leedahay dowlad da Libya, sida ay ku warrantay wakaalad da wararka ee AFP.
Dowladda ay taageerto QM ee Libya waxay dhinaceeda sheegtay in diyaarad da ay ku maqneyd howlgal ay ka fulineys ay koonfurta caasimadda Libya ilaa hadda wax fahfaahin ah lagama hayo shaqaalihii saarnaa diyaarada, sida ay sheegeyso AFP. iyadoo intaas ku dartay in diyaarad da ay lumisay xiriirkii balse aanana laga warheyn halkii ugu war dambeysay.
Dhinacyada ku dagaallamaya Libya ay aa 3dii bilood ee lasoo dhaafay ay diyaar ado kaga burbureen dagaallada socda.
Haddaba waa kuma Haftar?
Jan. Khaliifa Xaftar oo qayb ka ahaa siyaa sadda Liibiya muddo ka badan 40 sanno ayaa wuxuu noqday nin ay warbaahinta caalamka aad u hadal hayeen maalmihii la soo dhaafay. Khaliifa Xaftar Wuxuu ku dhashay bariga M/Ajdabiya, sanadkii 1943kii. Xaftar wuxuu ka mid ahaa koox saraakiil ah oo hogaaminaysay duulaankii Korneyl Mucamar Qadaafi uu awoodda ka ga qaaday boqor Idris, bartamihii 1969kii.
Ciidamo ka ammar qaata isaga ayaa la wareegay maamulka saldhigyada saliidda ugu waaweyn ee dalkaasi Liibiya, iyadoo ujeedkeedu uu ahaa, in dalalka saaxiibka la ah ay u dhoofiyaan shidaalka uu dalkaa si qaniga ku yahay, waxana ay saldhigte en magaalada dhinaca bari ku taalla ee Tobruk.
Hogaamiyihii hore ee dalka Libya, Ma camar Al Qadaafi ayaa Haftar u dallacsii yay garaadada ciidanka ugu sarreysa, wu xuuna taliye ka ahaa ciidamada Liibiya ee ka qeyb qaatay dagaalkii dalka Chad ay la galeen sannadkii 1980kii.
Ciidammada Chad oo garab ka helaya Faransiiska ayaa gacanta ku dhigay Xaft ar iyo 300 oo askari oo uu hogaaminayay sanadkii 1987kii, hasa yeeshee Qadaafi ayaa sheegay in ciidammadiisu aysan ku su gneyn dalka Chad oo waxaa uu inkiray in Xaftar uu yahay sarkaal u dhashay dalk iisa.
Arrintan ayaa horseedday in Xaftar uu billaabo dagaal socday 20 sano oo uu ku doonayay inuu Qadaafi xukunka uga tu uro.Wuxuu howlgalkiisa waday isagoo qa ab magangalyo siyaasadeed ah ku jooga gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Waxaa lagu tuhmi jiray inuu xiriir dhow la lahaa sirdoonka Mareykanka, ayna mar ar badan ku caawiyaan in kooxdiisa ay is ku dayaan khaarajinka Qadaafi.
Dib usoo noqoshada Haftar Ka dib markii uu billowday kacdoonkii looga soo horjeed ay Qadaafi sanadkii 2011kii, Xaftar wux uu ku laabtay Liibiya halkaas oo uu noqd ay taliye muhiim ah oo ka mid ah xoogag ga mucaaradka ah ee kacdoonka ka wad ay dhanka bari ee dalkaasi.
Makii ay dhacday dowladdii Qadaafi, Jan. Xaftar kama uusan soo muuqan shaa shadaha tan iyo bishii Febraayo ee sann adkii 2014kii, markaas oo uu qorshihiisa ka sheegay warbaahinta, si uu qaranka u badbaadiyo, wuxuuna ugu baaqay dadka Liibiya inay kasoo horjeestaan baarlama anka la doortay, Congresska Guud ee Qa ranka (GNC), kaas oo weli aysan mudd adu u dhammaan.
Hadalkiisa ayaa ku soo aaday xilli mar kaas Magaalada 2ad ee ugu weyn Liibiya, ee Benghazi iyo magaalooyin kale oo ku yaalla bariga ay saameeyeen la wareegi ddii ay la wareegeen kooxda AlQaacida da xiriirka la leh, ee Ansar AlSharia.
Waxaa soo baxay kooxo kale oo Islaa miyiin ah, kuwaasoo sameeyay dilal qorsh eysan iyo qaraxyo lagu bartilmaameed sa nayo milatariga, booliiska iyo shaqaale kale oo dowladeed.
Inkastoo Xaftar uusan xilligaas lahayn awood uu qorshihiisa ku hirgeliyo, hadda na hadaladiisa ayaa dhaliyay caro, gaar ahaan M/Benghazi oo dadkii ku noolaa ay niyad jabtay sidii ay GNC iyo dowladeeda ba ugu guul darreysteen inay la dagaalla maan Islaamiyiinta.
Wixii hadda ka horeeyay caannimada Jan.Khaliifa Xaftar ma dhaafsiisaneyn Li bya, inkastoo xiriir hore uu la lahaa Qadaa fi iyo Mareykanka, balse hadda oo ay cii dammadiisa ay ku sii siqayaan Caasimad da,wuxuu noqday janaraal indhaha caala mku ay eegayaan.
Howgalkii mabaadii'da Bishii May ee san nadkii 2014kii wuxuu Haftar bilaabay how lgal uu ugu magac daray Mabaadi'da Shar ciga oo looga soo horjeeday kooxaha Isla amiyiinta ah ee fadhigoodu ahaa Bengh azi iyo Barigeeda.
Bishii Maarso ee sannadkii 2015kii, Ba arlamaanka ayaa la doortay, Golaha Wak iillada oo beddelay GNC ayaa u magacaa bay taliyihii ciidanka Liibiya, balse sanad kadib oo horumar yar la sameeyay ayay weerrar ku qaadeen dagaalyahannada Isl aamiyiinta ah oo ka soo duulay M/Be nghazi.
Bishii Sebtembar 2016, Ciidanka Qar anka Liibiya waxay billaabeen howlgal la gu magacaaby "howlgalka ciribtirka", oo la gu badbaadinayo goobaha keydka shidaal ka, iygoo garabsanaya Q.M..
Goobaha muhiimka ah ee saldhigyada Saliidda waxaa ka mid ah Zueitina, Brega, Ras Lanuf iyo Sidrah , kuwaasoo dhamma an hodan ku ah saliidda loo yaqaan 'Cre cent Oil'. Markaasi ka dib, Afhayeenka iyo Taliyaha ugu sarreeya ciidamada qal abka sida, Agilah Saleh, ayaa dalacsiyay Xaftar oo waxaa uu ka dhigay taliyaha guud ee dalkaasi.
Inkastoo Haftar uusan ku faraxsanayn siyaasadaha maamulka dalkaasi ka jira ayaa haddana waxaan caddeyn damaci isa gaarka ah ee siyaasadda dalkaasi.
GAADIID DAGAAL IYO 700 OO ASKARI OO LAGU WAREEJIYAY DOWLADDA SOOMAALIYA
Gaadiid Dagaal iyo Ciidamo gaaraya 700 ayaa lagu soo bandhigay Degmada Balanballe kuwaasi oo lagu wareejiyay Tal iyay aasha Ciidamada Qalab ka sida waxa ana hal kaa Ku Gudoomey Was iiru dawla ha wasaaradda Gaashaandhig ga Dawlad da Faderaalka ee Soomaaliya Iyo Taliya asha Ciidamada Qaranka
Ciidamadan ayaa si toosa ugu biiri doona kuwa xoogga dalka, waxaan dhawaan la gu bilaabi doonaa Diiwaan galin ama (DATA BASE) Ciidanka.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirtaa sidii loo Qarameyn lahaa Malee sh iyaadka Hubeysan ee ku sugan degaan ada maamulka Galmudug, islamarkaana looga biirin lahaa CXD Soomaliyeed.
WHO : 10-KII DUMAR AH EE AFRIKAAN AH AFAR AYAA IS CADDEEYA
Dumar badan oo dunida ku nool ayaa wa ddo kasta u mara inay is caddeeyaan
"Markaan is eegay maalinkii arooskey da, foolxumo weyn ayaan isku arkay, waa m arkaan ugu foolxumaa abid," ayay tiri Shir oma, oo codkeeda ay murugo ka mu uqato. Waxay ku noshahay meel u dhaw caasimad da Sri Lanka ee Colombo. sida ay sameey aan inta badan dumarka ku no ol koonfurta qaaradda Asia, waxay go'aan satay inay is caddeyso ka hor maalinta ar ooskeeda. Wa xay rajeynaysay inay hesho midib dabacsan oo ifaya.
''Labo bilood ka hor maalinta arooskey ga, ayaan tegay goob la isku qurxiyo, wax ay i soo siiyeen Kareem la isku caddeeyo, hal 7aad un ka dib markii aan isticmaalay, maqaarkeyga dubkii ayaa ka kacay," sida as ayay u sheegtay Laanta afka Sinhala ee BBC. "Waxaan rabay inaan yeesho mi dib cad balse waan gubtay baddalkeedii," ayay tiri.
Halka ay markii dambe ka fakari laha yd martida arooskeeda imaanaysa, iyo ala ab gadasho, gabadhan oo 31 sano jir ah, wax aa waqtigeeda iyo lacagteedaba ka qaaday inay is daweyso.
Shiroma Pereira waxay muddo sanad ah isku dayeysaa inay iska daweyso finan ka madow ee ay qaadday kareemka la isku caddeeyo
"Makii hore waxaa igu billawday finan cadcad oo markii dambe madow isku bad delay." Kareemka aan adeegsaday ma aha yan mid si sharci ah dalka ku soo galay, oo waxaa lagu iibiyaa oo keliya su uqa madow.
Finin madow ayaa weli ka muuqda qoor ta Sharon, xitaa ka dib sanad oo ay is daw eynaysay. Dowladda Sri Lanka ayaa haa tan sheegtay inay tallaabo ka qaadi doon to Kareemada aan sharciga ahayn ee dal kaas laga isticmaalo.
Suuqa is caddeynta
Dhibkani kuma eka oo keliya ah Sri La nka, waxaa uu saameeyay malaayiin dumar ah oo qaaradaha Asia iyo Afrika ku nool. Suuqa is caddeynta ayaa sannad kii 2017kii lagu qiyaasay $4.8 bilyan, wax aana la filayaa inuu gaaro $8.9 bilyan sannadka 2027ka.
Suuqa is caddeynta ayaa la filayaa inuu gaaro 8.9 bilyan oo doollar sanakda 2027
Hay'adda Caafimaadka ee Adduunka WHO ayaa sheegtay in afar ka mid ah 10kii ga bdhood oo Afrika ku nool ay is cadd eeyaan.
Nigeria ayaa ugu badan, oo boqolkiiba 77 dumarka way is caddeeyaan. Waxaa ku xi ga Togo, boqolkiiba 59, iyo dalka Koonfur Af rika, oo ah boqolkiiba 35.
Qaaradda Asia, dumarka Hindiya ayaa bo qolkiiba 61 is caddeeya, halka Shiinaha ay tiradaasi gaarayso boqolkiiba 40.
Waxyaabaha la isku caddeeyo ayaa dhibaato weyn u gaysan karo maqaarka aadan aha
DHIBAATADA KA DHALATO
Inta badan dumarka ayaa adeegsada wax yaabaha la isku caddeeyo iyagoon la tas hanin wax takhtar ah, taasna waxaa ka dha lan karta dhibaatooyin halis ah, waxaa na ka mid ah:
Maqaar olol ama cuncun
Dareen ah in maqaarku gubanayo
(Xigasho Hay'adda Caafimaadka Britain ee loo yaqaanno NHS)
Kareemada la isku caddeeyo qaarkood ee dhaqso lagu caddaado waxaa lagu da ray maaddooyin aad halis u ah.
"Kareemada la isku caddeeyo ee leh maa ddada Mercury waxay halis weyn ku yihiin caafimaadka aadanaha," sida laga soo xig tay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Balse waxaa la ogaaday in dalal badan oo ay ka mid yihiin; Shiinaha, Lubnaan, Me xico, Pakistaan, Philippines, Maraykan ka iyo Thailand.
Maaddooyinka halista ah sida Mercury ayaa jirka aadanaha ka joojiyo inuu soo sa aro maaddada melanin oo dhaliso midi bka jirka. Dhibaatooyinka kale ee ka dhasho ma addooyinkaas waxaa ka mid ah:
Dhaawac soo gaaro kelliyaha
Kor cuncun, Jirka oo iska caabin waayo caabuqa Walwal iyo murugo xad-dhaaf ah
GUDDOOMIYIHII UGU DA’DA YARAA IYO MIDKII UGU DA’DA WEYNAA OO MAALIN QURA LOO KALA MAGACAABAY DEGMOOYIN KA TIRSAN G/BANAADIR
Sheeko aad u xiiso badan oo dad bad an soo jiidatay ayaa ka dhacday Xarunta looga arrimiyo Maamulka G/ Banaadir, arintaasi ay aa ka dhalatay kadib markii maalin qura laba ka mid ah Degmooyin ka G/Banaadir loo kala magacaabay Gud doomiyihii uga da’da yaraa iyo midkii ugu da’da weynaa maamulka Degmooy inka G/Banaadir.
Nasiib wanaag Degmada Xamar Jajab ayaa heshay Guddoomyihii ugu da’da yar aa Guddoomiyaasha Degmooyinka G/Ban aadir, Guddoomiyaha cusub ayaa la yiraah daa Guhaad Sheikh Xasan, waa ah nin dha llinyaro ah oo firfircoon, caan waxa uu ku yahay shaqo jaceyl & hufna an, hubaashii waa aqoonyahan hawlkar ah oo la filayo in uu wax badan ku soo kor dhin doono Deg madaasi.
Dhinaca kale Masuulka loo aqoonsad ay inuu yahay ninka ugu da’da weyn Gud doo miyaasha G/Banaadir ayaa lagu maga caa baa Muuse Geesey Jimcaale oo hog aamin doono Degmada Yaaqshiid, da’ah aan wax aa lagu sheegay inuu jiro Toddob aadan sa nno, masuulkaan ayaa ka tirsan aa xooggaga loogu yeero Waddaniyiinta, hore yna waxa uu uga soo shaqeeyay qa ar ka mid ah Degmooyinka G/Banaadir. Waana howlkariinta dalka iyo dadka ugu soo sha qeeyey xiliyadii hore haatan u diy aar ah in uu sii wato shaqada qaranka
SHIRKA GOLAHA WASIIRADA KOONFUR GALB EED OO LOOGA HADLAY ARRIMO KALA DUWAN
Shirka Golaha Wasiirada Dowlad Gobo leedka K/Galbeed Soomaaliya ,ayaa 7kan waxaa Shir Guddoomiyey Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen.
Shirka ayaa intii uu socday waxaa loo ga hadlay arrimaha,ammaanka, Dhaqaala ha, guud ahaan siyaasadda iyo Dagaalka ka dhanka ah Alshabaab ee ka socoda Gobo lada Baay ,Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Wasiirada Wasaaradaha amniga, Mal iyadda, Arrimaha Gudaha, oo Safar Sha qo ugu maqnaa Degmada Buurhakaba ay aa warbixino ku aaddan dhinacyada Ma mulka Cusub Degmada loo sameyey Tirik oobka Ciidanka iyo Hannaanka kor U qa adista Dhaqaalaha K/Galbeed ka siyey Madaxwe yne Laftagareen.
Sidoo kale Shirka inta uu socday wax aa laga hadlay Howlgalada Ciidanka Xoog ga Dalka ay ka wadaan G/Bakool iyo Shabee laha Hoose.
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta iyo Wac yigelinta Bulshada dowlad Goboleed ka K/G albeed Ugaas Xasan Abdi Maxa med ayaa Warbaahinta Faafahin ka siiyay Qodobadii looga hadlay shirka Shalay.
CUBA” WAA NOOL YIHIIN DHAQAATIIRTEENA LAGU HEYSTO SOOMAALIYA”
Dowladda Cuba ayaa xaqiijiysay in ay nool yihiin Labo dhakhtar oo Kubaan ah oo laga soo afduubtay xuduudda Kenya ee Soo maaliya bishii April ee sanadkaan sidda ay xaqiijisay Wasaaradda Caafima adka Cuba.
Wasiirka Caafimaadka ee Cuban Jose Angel Portal oo Shirkii jaraa’id ku qabtay magaalada Havaana wuxuu sheegay in Cuba ay sama ynayso wax walba oo macquul ah si loo sii daayo dhaqaatiirka lagu heysto Soomaaliya.
Wasiirka ayaa xusay in ay socdaan dadaallo ay waddaan Hay’addaha kala duwan ee dowl adda Cuba iyo waliba Kenya.
Waxaa uu tilmaamay in dowladda ay wada hadal la furi doonto Kooxda dhaqaatiirka Gacanta ku haya.
"Xukuumadda Cuba ma joojin doonto dada alkeeda ku aadan sii deynta,”ayuu yiri Wasiirka. Landy Rodriguez iyo asselka ah Assel Herrera oo ah labo dhaqtar oo u dha shay dalka Cuba ayaa lagu heystaa Soom aaliya, waxaana horay looga soo Afduubtay dalka Kenya oo ay ka waddeen howlo caaf imaadka.
Dowladda ayaa aaminsan in Kooxda heys taa ay ku sugan yihiin goobo ay maamul aan Ururka AlShabaab oo adag tahay in laga helo xog dheeraad ah Xaaladooda.
TALIYIHII HORE EE BOOLISKA AL JEERIYA OO MUSUQMAASUQ LOO XIRAY
Taliyihii hore ee booliska dalka Al Jee riya ,Abdelghani Hamle iyo labo wiil oo uu dhalay ayaa la xiray, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Ujeeddada loo xiray, waxaa lagu shee gay in lagu soo eedeyay fal musuqmaas uq, mana aysan ka hadlin taliyihii hore ee la xiray iyo labada wiil ee uu dhalay eed eynta loo soo jeediyay.
Xarigan ayaa ka dambeeyay, iyadoo booliska dalkaas uu muddooyinkii dambe waday howlgal iyo da bagal lagu hayay ma daxda dowladdii hore iyo ganacsatada waaweyn oo aad ugu dhowaa madaxwey nihi hore Cabducasiis Butafliiqa iyaga oo baaritaanno dheer oo la xiriira lagu sam eynayay musuqmaas uqa waday.
CALI GACAL OO KU BAAQAY XALINTA TAB ASHADA BEELAHA DEGA GALMUDUG
WarSaxaafadeed uu soo saaray gud doomiyaha Baarlamaanka Maamulka Gal mudug Cali Gacal Casir ayaa waxaa uu kaga hadlay xaalada Galmudug iyo shirka dib u heshisiinta ee dhawaan la filayo in uu qabsoomo.
Cali Gacal ayaa marka hore Xukuumadda Soomaaliya uga mahad celiyay qorshaha xalin ta khilaafkii Galmudug iyo dhisida Galmudug Mideysan,xilli uu wado qorshahaas R/Wasaare kheyre.
Sidoo kale waxaa uu soo dhaweeyay Shirka dib u heshiisiinta Galmudug ee dha waan la filayo in uu qabsoomo,waxaana XFS uu ugu baaqay inay xoog ku bixiso xalinta tabashada Beelaha dega deegaan ada Galmudug.
Hoos Ka Akhriso WarSaxaafadeedka gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir.
CAWAD: KENYA WAY NOOGA DUWANTAHAY GINI
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaa shiga caalamiga ah ee XFS, Axmed Ciise Cawad ayaa la waydiiyay sababta ay sida dhaqsada ah xiriir ka ugu jareen dalka Gini ee ay ugu dhici waayeen dalalka kale ee gobolka oo ay Kenya ka mid tahay.
Wasiirka oo la hadlay BBCda ayaa sheeg ay in dalka Kenya uu ka mid yahay dalal ka dariska ah , taasina ay keenayso inay dulqaad badan u muujiyaan.
"Kenya way nooga duwantahay Gini, xir iiro badan baa naga dhaxeeyay , wax is dhaafsi badan baa naga dhaxeeyay, mala ha samir dheeraad ah ayaan u muujinay Kenya.. xiriirkayagu heerka uu ahaa iyo darisnamada naga dhaxeysa daraadeed." ayuu yiri Cawad oo marka ka jawaabayay Kenya oo sameysay dhaqdhaqaaqyo la mid ah midka Gini sababta aysan go'aan uga qaadan.
Dalalka Gini iyo Kenya ayaa soo dhaw eysanayay mas'uuliyiinta Soomaaliland, iy adoo maamulka uu raadinayo inuu madax bannaani ka helo JFS
Waxaa kalo uu ka jawaabay, wasiirka arrimaha dibadda hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Kenya oo she egtay inuu daciif yahay kiiska badda ee 2da dal u dhaxeya, wuxuu arrinta uga jaw aabay 'iyada ayay la tahay' isagoo inta ku daray in nooca uu kiiska yahay ay maxk amadda cadaaladda ee ICJda go'aan ka gaari doonto.
KHEYRE "DHAMAYSTIRKA DHISMAHA GAL MUDUG WAXAY FURSAD INOO SIINEYSAA DHAMEYSTIRKA DAGAALKA”
R/Wasaaraha JFS Md. Xassan Cali Khayre ayaa shalay sheegay in lagama maarmaan tahay midnimada Galmudug, si loo dhameystiro ho wlgalka AlShab aab looga xoreynayo goo baha ay kaga harsan yihiin Dowlad Gobol eed ka Galmudug.
R/Wasaaraha oo ma anta salaaddii Jimcaha kula dukaday mas jidka Ragaya boqollaal qof oo reer Dhuus amareeb ah ayaa hadal uu ka jeeiyay ku bogaadiyay dadaalka ay culumadu hogga amineysay ee lagula dagaallamay Alsha baab, isaga oo ku baaqay in loo midoobo sidii dalka oo idil looga ciribtiri lahaa.
Dhanka kale R/Wasaaraha ayaa ka digay dhibaatada ay qabyaaladdu leedaha y iyo saameynta xun ay bulshada ku reeb to. Waxa uu farta ku fiiqay in loo baahan yahay in si wadajir ah looga dagaallamo.
GOLAHA MILITARIGA SUUDAAN IYO MUCAAR ADKA OO HESHIIS GAARAY
Golaha Ciidamada Suudaan ayaa he shiis awood qayb si ah la gaaray xul afa da mucaa rad ka inta ay dal ka do or asha ka dhacey so. Koox da Wada xaajoodka ka dhex wada labada dhinac waxa ay sheegeen iney awoodaha ugu sarreeya dalka wareegta ka dhigaan.
Ururka Midowga Afrikana wuxuu shee gay iney labada dhinac ku heshiiyeen in la dhiso dowlad madax bannaan iyo in la ba aro rabshadihi toddobaadyadii ugu dambe eyey dhacayey iyo dhibaatooyinka ka dha shay.Warka ku saabsan heshiiska labada dhinac ay gaareen markii la shaaciyey wa xaa waddooyinka dalkaasi isugu soo bax ay dadweyne heshiiska ku faraxsan. Xa aladda dalka Suudaan ayaa cakirn eyd tani iyo marka xilka laga tuuray madaxwe ynihi hore ee Suudaan Omar alBashir bishii April ee sanadkan.
Mudaharaadyada dalka Suudaan ka so cday ayaa ahaa mid looga soo horjeeday xukunka Mr Bashiir oo talada dalka afgam bi ku qabsaday June 1989.
Wadahadallada labada dhinac ku dhex marayey qasriga madaxtooyada Kharto um oo horraanti toddobaadkan dib u billa wday waxaa dhexdhexaadinayey Risulwa saaraha Itoobiya iyo Xubno ka socday mid owga Afrika.
ALSHABAAB OO MARKALE TOOGASHO KU FULIYAY 5 RUUX
Falkan toogasho ah ayaa AlShabaab waxaa ay ka fuliyeen fagaaro ku yaalla deegaanka Salagle ee gobolka Jubbada Dhexe,waxaana ay ku fuliyeen 5 Rag ah oo ay ku Eedeeyeen inay la Shaqeeynay een Dowladda Federaalka iyo Dowladaha taageera.Goobta AlShabaab ay ku toogte en 5ta ruux ayaa waxaa ku sugnaa Boqo a al ka mid ah Shacabka deegaa nka Xag ar ee gob olka Jubbada Hoo se, kuwaas oo AlShabaab ay ku amr een inay fagaarahaas tag aan si toogashada ay u daawadaan.
5taRuux oo ay AlShabaab toogasha da ku fuliyeen oo dhamaa ntood rag wada ah ayaa waxaa ay Magacyadooda ku ka la sheegeen.
1: Maxamuud Bashiir Hilowle oo ay ku eedeeyeen inuu la Shaqeynayay Sirdoon ka Mareykanka.
2: Cabdi Xakiin Xuseen Cabdi Nuur oo ay ku eedeeyen inuu la Shaqeynayay Dow lad goboleedka Jubbaland.
3: Cabdi Raxiim Axmed Yuusuf oo lagu eedeeyay inuu la Shaqeynayay Sirdoonka Mareykanka.
4: Isxaaq Cabdullaahi Xasanoow oo ay AlShabaab ku eedeeyaan inuu la Shaqeyna yay Maamulka K/ Galbeed.
Iyo Idiris Yuusuf dhallin oo lagu eedeeyay inuu la Shaqenayay Ciidamada Bangaraaf ta ee xoogga dalka Soomaaliyeed,kuwaas oo uu tababaray Mareykanka.
Waa maalintii 2ad oo xriir ah oo ay AlShabaab toogasho ku fuliyaan dad ay ku eedeynayaan inay la Shaqeeyaan DFS iyo Dowladaha taageera,waxaana maalin ka hor fagaaro ku yaalla deegaanka Xag ar ee gobolka Jubbada Hoose ay ku toog teen 5 Rag ah oo ay ku Eedeeyeen la Sa hqeynta Dowladda iyo dalalka taageera.
(gudaha dhulka SOMALIA)
OGEYSIISKAN AYAA ALGU SIIYEY TAASSIMEDARBYPLANTATION BERHAD, a Malaysian company with head office at Main Block, Level 10, Plantation Tower, No. 2, Jalan PJU 1A/7, AraDamansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor DarulEhsan, MALAYSIA
Miyuu leeyahay mulkiilaha iyo mulkiilaha shakhsiga ah ee soo socda:
Calaamadaha kor ku xusan waxaa loo adeegsadaa fasalka caalamiga ah 29 marka loo eego waxyaabaha soo socda:
Fasalka 29aad: Dufanka iyo dufanka cuntada, saliidda la cuni karo, saliidda la cuni karo iyo dufanka laga helo dhirta, saliida la cuni karo iyo dufanka leh saliid cadi ah, saliid la cuni karo iyo dufan leh qudaar saliideed leh, iyo dufan, emulsions of salami la cuni karo iyo dufan, dabeecada saliidda, saliidaha wax soo saarka, saliida wax lagu kariyo, dufanka isku dhafan, saliid kariska isku dhafan (isku dhafka saliidda olein iyo saliidda qorraxda) dufanka, dufanka macmacaanka ah, dufanka macmacaanka ah ee laastikada ah, dufanka aan macmacaanka lahayn, dufanka, dhirta qudaarta iyo dufanka, saliidaha cuntada khudradda cagaaran (saliid cagaaran oo saafi ah), saliid qudaar ah, saliidaha qudaarta, saliida qumbaha, saliida qaxwada, saliidaha cad cad, saliida jooniska, saliidda hadhuudhka, saafi saliida shimbiraha, saliida qudaarta, saliidaha qorraxda, saliida saliidda ee loo isticmaalo saliid; lecithin ujeedooyinka culeyska; ghee, gheead saafi, ghee qudaar ah, ghee qudaar ah oo wanaagsan; saliidaha dufanka ah, saliidaha la kariyey, saliidaha dufan ee la kariyey, saliidaha dufanka leh, saliidaha dabacsan, saliidaha caleenta, timirta timirta ah, timo cad, olein,oodin daacad ah, olein dhexdhexaad ah olein, olein aalado leh, oleen cas, olein casaan leh; saliidaha laastikada ah; xayawaanka xoolaha, bedelka xayawaanka xoolaha (saliidda timirta iyo stearin); subagga caanaha, subaga caanaha badarka (saliida olein, saliida timirta ah iyo saliidda cagaarka ah); margarines, margarines oo ay ku jiraan saliid calaacal ah, margarines oo leh saliid dabacsan oo sarreeya, beddelka margarine, margarineka hooseeya, margarineska la shiilay; subagga, subagga qumbaha iyo dufanka, subagga kookaha, subagga kookaha, subag yar, subag baraf ah, subagga subagga; saliid nafaqo iyo dufan; dufanka naaska ilmaha; Dhammaan waxyaalaha kor ku xusan waxaa loo isticmaali karaa cuntada, kariska, wax soo saarida iyo soo saarida wax soo saarka cuntada iyo macmacaanka, macmacaanka sonkorta, daboolka la kariyo, glazes iyo buuxsamida, margarin macmiilka, faafidda, dharka, waxyaabaha la cuno, macmacaanka, jalaatada, caanaha la barafeeyey iyo macmacaanka la qaboojiyey, beddelidda dufanka xayawaanka ee soo saaridda hilibka iyo hilibka digaaga, sausages, frankfurters, burgers iyo salami; caano qumbaha, kareemka qumbaha, kalluunka qumbaha; hilibka, kalluunka, digaaga iyo ciyaarta, kalluunka qasacadaysan, sardines [aan noolayn], saladh kalluunka, cunto barafaysan oo ka kooban cuntooyinka badarka ama digaaga; cunnada hilibka; khudaarta cagaaran, khudaarta cagaaran, khudaarta cagaaran, khudaarta cagaaran, boqoshaada la qalajiyey, baradhada baradhada, baradhada baradhada, baradhada shiilan, pickles, casiir yaanyo lagu kariyo; miraha qasacadaysan, lychee qasacadaysan, rambutan qasacadaysan, cananaaska qasacadaysan, miraha fuuqbaxay, miraha barafaysan, miraha la ilaaliyo, qumbaha cawska laga sameeyey; miro la warshadeeyey, fangaska iyo khudaarta (oo ay ku jiraan nuts iyo duurjoogta), diyaarinta iyo dubitaanka dubaalka, diyaarsada, yicibta, lawska; saladh miro, saladh qudaar ah; jellies, jamacyada, waxsoosaarka, dhoobada miraha, galka meylka, buuxinta miro khudradda cagaarka iyo roodhida iyo waxyaabaha la dubo; subagga looska; ukunta; Caanaha iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo, cabitaanka caanaha, caanaha gogolka ah, shimbiraha raashinka; farmaajo, farmaajo qaabab kala duwan, xaleef iyo budo; caanaha aan caanaha ahayn, borotiin aan saliid lahayn oo aan caan ahayn; cunto diyaarsan, maraqyada iyo kaydka, cuwaafaha iyo macmacaanka, cunto diyaar ah oo la cuno [la qaboojiyey, aan la qaboojinin oo la qalajiyey]; curry digaag, curry kalluunka, curry kalluunka, curry prawn, curry digaag cagaaran, anchovies ee suugada basbaas, hilibka lo'da iyo hilibka digaaga, hilibka lo'da iyo hilibka digaaga, hilibka lo'da; maraq deg deg ah, maraq horay loo kariyey, maraq qasacadaysan, kareem maraq, budada maraqa, maraq baruurta; isku darka cuntada oo ka kooban miro fuuqbax iyo lowska la nadiifiyo.
OGAYSIIS WAXAA KA BIXIYAY in dacwadaha sharci loo hirgaliyo qof kasta ama shirkad isticmaasho isku mid ah calaamad la mid ah ama mid kale oo ku-takri ah, ama ka horjeeda qof kasta oo jabiya xuquuqda lahaanshaha calaamadaha.